सबै भिसाका लागि योग्य नहुने भएकाले धेरैलाई लोटरी पार्नुपरेको हो :: सिन कुपर (डाइरेक्टर अफ फिल्ड अपरेशन, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको भिसा कार्यालय) – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१० आश्विन २०७७, शनिबार १९:१५ English
सबै भिसाका लागि योग्य नहुने भएकाले धेरैलाई लोटरी पार्नुपरेको हो :: सिन कुपर (डाइरेक्टर अफ फिल्ड अपरेशन, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको भिसा कार्यालय)
आतंकवादी गतिविधि भइरहेका देश वा भूभागबाट डिभी लोटरी भर्नेहरुको पृष्ठभूमी जाँच कसरी गरिन्छ ? त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति डिभी लोटरीमा छनौट भए नभएको कसरी जाँचिन्छ ?
सबै देशका आप्रवासी सरह नै उनीहरुको पनि स्क्रिनिङ गरिन्छ । अरु देशका आप्रवासीहरु सरह नै उनीहरुको पनि पृष्ठभूमी जाँच गरिन्छ । र अन्य प्रकारका आप्रवासी भिसाका लागि जसरी पृष्ठभूमी जाँच गरिन्छ , त्यसरी नै डिभी भिसाका लागि पनि पृष्ठभूमीको जाँच गरिन्छ । हरेक भिसाका लागि सुरक्षा नै पहिलो प्राथमिकता र चासोको विषय हो । भिसा अन्तरवार्ता जुन देशबाट आवेदन दिएको हो त्यही देशमा लिइन्छ । जस्तो कुनै नेपालीको भिसा अन्तरवार्ता काठमाडौंमा नै हुनेगर्छ । त्यसैले काठमाडौंमा भएको कन्सुलर कार्यालय नै कुनै व्यक्ति भिसाका लागि योग्य भए नभएको निर्धारण गर्छ । भिसाको लागि आवेदन दिएका व्यक्तिको पृष्ठभूमी त्यही देशमा नै चेक गरिन्छ । आवेदकको प्रहरी रेकर्ड लगायतका विषयहरु पनि सम्बन्धित देशको दूतावासबाटै चेक गरिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई डिभी लोटरी परिसकेपछि भिसाको लागि आवेदन दिँदा उसले आफ्नो र परिवारको बारेमा थप सुचनाहरु दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको आधारमा त्यो व्यक्ति भिसाको लागि योग्य भए नभएको निर्धारण गरिन्छ ।
अमेरिकी सरकारले आतंककारीको सुचीबाट हटाएको नेपालका माओवादीहरु डिभी लोटरी भर्न योग्य हुन्छन् कि हुँदैनन् ?
हामी यो प्रश्नको सम्बोधन गर्न सक्षम छैनौं । यो प्रश्न हाम्रो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको भएकाले हामीले यस विषयमा जवाफ दिन सक्दैनौं । त्यसका लागि हामी क्षमाप्रार्थी छौं ।
सन् २०१४ को लागि झण्डै ६ हजार नेपालीहरुलाई डिभी चिठ्ठा परेको थियो । तर धेरैले भिसा पाएनन् । अहिले उनीहरुले डिभी परेर पनि अमेरिका आउन नपाएकोमा अमेरिकाप्रति आक्रोश व्यक्ति गरिरहेका छन् । ३५ सयलाई मात्र अमेरिकामा ल्याउनु थियो भने किन धेरैलाई लोटरी जिताएको होला ?
हामीले हरेक वर्षको डिभी कार्यक्रमका लागि विश्वब्यापी रुपमा ५० हजारको संख्यामा मात्र भिसा उपलब्ध गराउदै आएका छौं । त्यसैले हामीले ५० हजारको संख्यामा भिसा उपलब्ध गराउनका लागि त्यो भन्दा धेरै व्यक्तिलाई डिभी लोटरी पार्दै आएका छौं । डिभी लोटरी परेका सबैजनाले भिसाका लागि आवश्यक योग्यता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले हामीले भिसा नम्बर भन्दा धेरै व्यक्तिलाई डिभी लोटरीको विजेता बनाउने गरेका हौं । सुरुमा डिभी लोटरी जितेका केही व्यक्ति शैक्षिक योग्यता लगायतका विभिन्न कारणले भिसा प्राप्त गर्न योग्य हुँदैनन् । जब डिभी लोटरी जितेकाहरुलाई केन्टकी सर्भिस सेन्टरले थप जानकारी प्राप्त गराउनका लागि आग्रह गर्छ , त्यतीबेला विजेताहरुले यथाशक्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । यदि उपलब्ध जानकारीका आधारमा त्यो व्यक्ति अयोग्य ठहरिएमा उसले भिसा प्राप्त गर्न सक्दैन । अर्को तर्फ डिभी लोटरी विजेताका लागि छनौट प्रकृया ¥याण्डम हुने गर्छ । त्यसैले कुनै कुनै देशलाई उपलब्ध भिसा नम्बर भन्दा धेरैलाई लोटरी पर्ने गर्छ । अर्कातर्फ डिभी लोटरी पर्ने हरेकले आफ्नो योग्यता पुष्टी गर्न सक्दैनन् । उदाहरणका लागि ३५ सय नेपालीलाई डिभी लोटरी परेमा ७ सयले भिसाका लागि आफ्नो योग्यता प्रमाणित नगर्न सक्छन् । त्यसैले भिसा नम्बर भन्दा धेरैलाई डिभी विजेता बनाएर त्यसबाट योग्यहरु छनौट गर्नु परेको हो । केही व्यक्तिलाई डिभी लोटरी पर्छ, उनीहरु अमेरिकाको भिसा पाउन अयोग्यको सुचीमा पनि हुँदैनन् । तर उनीहरुले आफ्नौ शैक्षिक योग्यता पुष्टि गर्न सक्दैनन् । वा उनीहरुको पृष्ठभूमी परिक्षणमा केही समस्या देखिन सक्छ । यस्तो अवस्था आएमा पनि उनीहरुले भिसा पाउँदैनन् । यो कुरा नेपाली समुदायले बुझ्न जरुरी हुन्छ । किनभने हामीले नेपाली समुदाय वा अन्य समुदायलाई समान कानुनको आधारमा व्यवहार गर्नुपर्छ ।
विगतको डिभी लोटरी कार्यक्रममा भाग लिएकाहरु र भिसा संख्याको सिमितताका कारण अमेरिका आउन नपाएकाहरुले फेरी पनि डिभी लोटरी भर्न पाउँछन् ?
यो एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो । पहिले डिभी लोटरी भरेका वा भिसा संख्याको सिमितताका कारण अमेरिका आउन नपाएकाहरुले फेरी पनि डिभी लोटरी भर्न सक्छन् । यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्छन् । उनीहरु छनौट भएमा अमेरिका आउन पनि सक्छन् ।
डिभी लोटरीबाट हरेकवर्ष अमेरिकामा आउने भनिएको ५० हजारको संख्यामध्येबाट एउटा देशले ७ प्रतिशत भन्दा बढी भिसा प्राप्त गर्न नसक्ने बताइन्छ । यसो गर्दा एउटा देशबाट हरेक वर्ष ३५ सय भन्दा धेरैले भिसा नपाउने भए । तर कुनै कुनै देशबाट त ३५ सय भन्दा धेरैले पनि भिसा पाएको देखिन्छ नि ?
हामीले विगतका वर्षमा डिभी परेर अमेरिकामा आउनेहरुको संख्या हेर्दा कुनै पनि देशबाट ७ प्रतिशत भन्दा बढी नाघेको देखिन्न । यो ५५ हजारको ७ प्रतिशत हो । हामीले हरेकवर्ष कुनै पनि देशबाट ३८५० भन्दा धेरैलाई डिभी कार्यक्रम अन्तरगत भिसा इस्यु गरेका छैनौं । कुनै पनि देशले डिभी कार्यक्रम अन्तरगत ३८५० भन्दा धेरैले भिसा पाएको हामी विश्वास गदैनौं ।
७ प्रतिशत भनेको प्राइमरी डिभी विजेता हुन् वा उनीहरुका परिवारसहित हो ?
यो एकदम राम्रो प्रश्न हो । यो संख्या डिभी लोटरी जित्नेका दम्पत्ति र बच्चाबच्ची सहित नै हो ।
केही वर्ष पहिले डिभी लोटरी विजेता घोषणा गर्दा गम्भिर गल्ती भएको थियो । सुरुका दुई दिनमा डिभी भर्नेहरु नै विजेता भएका थिए । अब यस्तो गल्ती हुन नदिन नयाँ विधि अपनाइएको छ कि छैन ?
सन् २०१२ मा यस्तो भएको थियो । त्यसैले गल्तीलाई सच्याएर पुन विजेता छनौट गरेर घोषणा गरिएको थियो । तर अहिले हामीले ¥याण्डम छनौटका लागि नयाँ विधि अपनाइरहेका छौं । भविश्यमा पनि हामीले नयाँ विधि अनुशार ¥याण्डम छनौट गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौं । हामीले यो विषयलाई निकै गम्भिरतापूर्वक लिएका छौं ।
डिभी लोटरी भरेका केही नेपालीलाई पर्यटक भिसा उपलब्ध गराउँदा समेत भिसा अधिकृतले डिभी भरे नभरेको सोध्ने र भरेको भएमा अमेरिकामा बस्ने आसय रहेछ भन्दै भिसा दिन अस्वीकृत गर्ने गरेको समेत पाइएको छ । डिभी लोटरी भरेका व्यक्ति अन्य गैर आप्रवासी भिसाका लागि योग्य हुँदैनन् ?
डिभी लोटरीमा भाग लिएर डाइभर्सिटी भिसाका लागि अयोग्य हुनु र अमेरिकाका लागि अन्य गैर आप्रवासी भिसाका लागि आवेदन दिनुबीच कुनै सम्बन्ध हुँदैन । डिभी लोटरीमा भाग लिदैमा कुनै पनि व्यक्ति अन्य भिसाका लागि अयोग्य हुने भन्ने कुरै आउँदैन । त्यसैले डिभी लोटरीमा भाग लिएको कुनै पनि व्यक्तिले अन्य भिसाका लागि आवेदन दिन सक्छ । किनभने यी दुईवटा फरक फरक सन्दर्भ हुन् । डिभी लोटरी भरेको वा डिभी परेर योग्यता पूरा गर्न नसक्दा अमेरिका आउन नसकेको व्यक्तिले पनि अमेरिकाको अन्य भिसाका लागि आवेदन दिन सक्छ र अमेरिका आउन सक्छ ।
डिभी लोटरीका लागि आवेदकले दिएको सुचना अमेरिकी सरकारले अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्छ कि गर्दैन ?
अमेरिकाको अध्यागमन सम्बन्धि कानुन अनुशार अमेरिकाको सबै भिसा रेकर्ड गोप्य राखिन्छ । अन्य प्रयोजनका लागि त्यो रेकर्ड प्रयोग गर्न प्रतिबन्धित छ । डिभी लोटरी भर्दा आवेदकले दिएको सुचना पनि अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिदैन ।
सन् २०१५ को डिभी लोटरी विजेताहरुले भिसा पाउनका लागि के गर्ने ?
उनीहरुले केन्टकी सर्भिस सेन्टरले मागेको सुचनाहरु उपलब्ध गराउनुपर्छ । विजेताहरु केन्टकी सर्भिस सेन्टरको सम्पर्कमा रहिरहनुपर्छ ।
अन्तरवार्ताका लागि खसोखासका तर्फबाट धन्यवाद ।
यो अवशर प्रदान गरेकोमा तपाईहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद । यसबाट हामीले तपाईहरुका पाठकहरुले डिभी कार्यक्रमबारे राम्रो जानकारी पाउनेछन् भन्ने अपेक्षा गर्दछौं ।
(सिन कुपर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको भिसा कार्यालयमा सन् २०१३ देखि फिल्ड अपरेशन डाइरेक्टर हुनुहुन्छ । यसअगाडि अमेरिकी विदेशमन्त्रालयको विदेश सेवा अधिकृत, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको भिसा कार्यालयको कोअर्डिनेशन डिभिजन प्रमुख , अमेरिकी दूतावास अबुधावीमा कन्सुल जनरल, अमेरिकी दूतावास दोहाको कन्सुलर सेक्सन प्रमुख, किङस्टनको अमेरिकी दूतावासमा गैरआप्रवासी भिसा प्रमुख लगायतका पदमा रहेर काम गरिसक्नुभएका कुपरसँग खसोखास साप्ताहिकका लागि प्रधानसम्पादक किशोर पन्थीले खसोखासकर्मी रोबिन झाको सहयोगमा लिनुभएको अन्तरवार्ता । यो फोन अन्तरवार्ताका लागि अमेरिकी विदेशमन्त्रालयको पब्लिक अफेयर्स कार्यालयका प्रेस अफिसर आस्ले गारिगसले सहजिकरण गर्नुभएको हो । )
१० कार्तिक २०७१, सोमबार ११:२१ मा प्रकाशित